China Cas 62-44-2 Phenacetin China fekitori uye vatengesi | Minshang
Phenacetin isiri-opioid analgesic isina anti-inflammatory properties, inhibits COX-3 chiitiko. iyo yekiriniki uye ye laboratori data yaienderana ne "phenacetin nephritis" sekutsanangurwa muEurope neAustralia uye munguva pfupi yapfuura muUnited States neCanada. Chirevo ichi chinoongorora zvakawanikwa mumatambudziko makumi maviri nematatu uye yambiro pamusoro pekushandiswa kwepenacetin, kunyanya kune varwere vane hurema hwehunhu . Phenacetin yakave yakabatanidzwa neiyo renal papillary necrosis muvanhu
Phenacetinis non-opioid analgesic without anti-inflammatory properties, inhibits COX-3.Target: COXPhenacetin inorwadza-inoderedza uye kupisa-kupisa zvinodhaka, Phenacetin yakabviswa mumusika weCanada muna Chikumi 1973 nekuda kwekunetseka maererano nephropathy. iyo yekiriniki uye ye laboratori data yaienderana ne "phenacetin nephritis" sekutsanangurwa muEurope neAustralia uye munguva pfupi yapfuura muUnited States neCanada. Chirevo ichi chinoongorora zvakawanikwa mumatambudziko makumi maviri nematatu uye yambiro pamusoro pekushandiswa kwepenacetin, kunyanya kune varwere vane hurema hwehunhu . Phenacetin yakave yakabatanidzwa neiyo renal papillary necrosis muvanhu
Phenacetin isiri-opioid analgesic isina anti-anogumbura zvivakwa uye inogona kutadzisa COX-3 chiitiko.
Kuwandisa 1.0 ± 0.1 g / cm3
Boiling Point 323.6 ± 44.0 ° C pa760 mmHg
Kunyorera Nzvimbo 133-136 ° C (kuvhenekerwa.)
Molecular Kurema 179.216
Misa chaiyo 179.094635
Mhepo Yekumanikidza 0.0 ± 0.7 mmHg pa25 ° C
Index yeRefraction 1.506
Kugadzikana Muchitevere. Inoenderana neakasimba oxidizing vamiririri, yakasimba acids
Kugadzikana Kwemvura 0.076 g / 100 mL
Tiri Hebei minshang hwokushandura zvinhu zvipenyu co. LTD., Inonyanya kubata mune zvemishonga intermediates uye akasiyana makemikari.Tiri vagadziri uye tine yedu fekitori.Products & UsagePharmaceutical intermediates, makemikari, zvinowedzerwa, pigmentsPharmaceutical giredhi, maindasitiri giredhi, chikafu giredhi, zuva nezuva makemikari zvigadzirwaTine yedu yakanyoreswa capital yeRMB 3 miriyoni. Chinangwa chedu ndechekugara nemhando yepamusoro uye kukura nechikwereti Mumakore maviri apfuura, zvigadzirwa zvedu zvakapararira pamusoro penyika dzinopfuura makumi matatu pasi rose, USA, Netherlands, Poland, Canada, England, Italy, India, Columbia zvichingoenda zvakadaro. Isu tinoshanda pamwe neshamwari pasirese kusimudzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo inonzwisisika, kutakura kwakachengeteka uye kunoshanda. Chigadzirwa chinogona kurairwa kubva pamamirigiramu kusvika kumatoni. Sangana nekutengwa kwevatengi vatsva nevekare vatengi.Tiri vagadziri vanogona kukupa iwe inonyanya kukwikwidza mitengo uye yekukurumidza uye yakachengeteka kutakura, basa remhando yepamusoro.
Pashure: Cas 96-48-0 GBL China mutengesi wegamma-Butyrolactone
Zvadaro: Cas61-54-1 tryptamine Fekitori yakananga muchitoro
Yakachena kuchena 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone ...
Manufactur yakajairwa China Fekitori Mutengo API Edza ...